Usatengese ruzivo rwangu - MediaLight Bias Lighting
Kodzero dzako pasi peCalifornia Consumer Yakavanzika Mutemo
Iri peji rinodiwa pasi pemutemo weCalifornia. Isu hatitengesi ruzivo rwako kana kuchengetedza chero zvinyorwa zvekushambadzira. Kunze kwekutumira ruzivo rwekutevera kwauri uye chikumbiro chekutumira ongororo kana MediaLight yako yaiswa, hausi kuzonzwa kubva kwatiri kana wangogamuchira mwenje wako (Kana iwe uchida zvigadzirwa zvekuvandudza, ndapota titevere pa Twitter, nekuti isu hatiite. usatumire chero maemail ekushambadzira).
ICalifornia Consumer Yakavanzika Mutemo (CCPA) inokupa iwe kodzero maererano nemabatirwo aunoitwa data rako kana rako pachako. Pasi pemutemo, vagari veCalifornia vanogona kusarudza kubuda mu "kutengesa" kweruzivo rwavo pachavo kune vechitatu mapato. Zvichienderana nedudziro yeCCPA, "kutengesa" kunoreva kuunganidzwa kwedatha nechinangwa chekugadzira kushambadzira uye kumwe kutaurirana. Dzidza zvakawanda nezveCCPA uye kodzero dzako dzekuvanzika.
Maitiro ekusarudza kubuda
Nekudzvanya pane iyi link iripazasi, hatichazounganidza kana kutengesa ruzivo rwako. Izvi zvinoshanda kune vese vatatu-mapato uye iyo data yatinotora kuti tibatsire kusarudzira ruzivo rwako pane yedu webhusaiti kana kuburikidza nekumwe kutaurirana. Kuti uwane rumwe ruzivo, tarisa edu zvakavanzika mutemo.